I-06 / 01 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: NgoJanuwari 6, 2020
Ukubambisana ne-TÜVASAŞ yeeProjekthi zeSakarya Light Rail System
U-Ekrem Yüce, usodolophu woMasipala oMbaxa weSakarya, weza kunye namagosa e-TÜVASA and kwaye babonelela kwintsebenzo kwiindlela ezikhanyayo zololiwe ezijolise ekwakhiweni eSakarya. USodolophu uYüce uthe, ası Into yokuba umzi-mveliso omkhulu njengeTÜVASAŞ ukweso sixeko sethu [More ...]
P & O FERRYMASTERS Growth enquma Turkey kunye noMbindi Mpuma
P & O fferrymasters namhlanje, ngenxa kulungiselelo ipani-European iinkonzo e Turkey waqhubeka ukwanda yayo Asia kwiminyaka emibini elandelayo, iye ubhengeze izicwangciso ukuvula ofisi ezintsha ezintlanu. I-P&O Ferrymasters, ukongeza kwisiseko sayo esikhoyo e-Istanbul, [More ...]
Umyalezo ovela kubasebenzi be-Ankara Sivas Railway Railway
I-Ankara-Sivas phakathi kweeyure ezi-2 nemizuzu engama-30 iya kunciphisa indlela yeSilika kwi-405 Km phakathi kweprojekthi ye-Ankara-Sivas YHT iyaqhubeka nokusebenza ngesantya esipheleleyo. Iprojekthi ye-Ankara Sivas YHT ingama-300 abantu abangama-7/24 imini nobusuku [More ...]
Ukungaqiniseki kuyaqhubeka kwiSamsun Sivas Railway Line .. Uvavanyo loLoliwe okanye uQeqeshi lokuhlola?
Umphathi Jikelele we-TCDD kunye nabathunywa abahamba nabo ngololiwe ngentsimbi ye-09.00: 21 kusasa ukusuka eSamsun ukuya eSivas (Thick) baye kwicala. Owasungula le Great Leader Mustafa Kemal Ataturk Republic of Turkey ngoSeptemba XNUMX, [More ...]
İmamoğlu: Iprojekthi yaseKhanal İstanbul ayinakuba 'ndiyenzile iprojekthi'
U-Ekrem Imamoglu, uSodolophu wase-Istanbul Metropolitan, utyelele umasipala wesithili ali-19 waseBagcilar. U-amoamoamolu uphendule imibuzo yeentatheli malunga ne-ajenda ngexesha lokuphanda kwakhe eBağcılar. Imamoglu, intatheli, uMongameli Recep Tayyip Erdogan's [More ...]
I-TÜVASAŞ yeSizwe soQeqeshi seProjekthi yokuThengwa kweeMviwo zoMlomo!
Turkey Wagon Industry Corporation (TÜVASAŞ) phantsi kwe Project Railway National abafanelekileyo ukuba bathathe inxaxheba abaviwa iimviwo ngomlomo ukuba aqeshwe, imihla leemviwo ngomlomo, amaxesha nendawo yokungena examination for amaxwebhu [More ...]
Umnyhadala weSize obanjelwe eOrdu Plateaus
Umasipala wase-Ordu Metropolitan ukuze kuphuculwe ukhenketho lwemidlalo yasebusika kunye nokhenketho lwasebusika kwiphondo laseOrdu waququzelela umnyhadala otyhidiweyo kwiitayile ezi-3 ezahlukeneyo. Umthendeleko otyhidiweyo oququzelelwe nguMasipala weNqila kwaye wabanjwa okokuqala eOrdu; [More ...]
Ucalucalulo olufanelekileyo ngokuchasene nabafazi kuZothutho eMuğla
USodolophu kaMasipala oMbaxa weMuqula Ngomyalelo owanikwa ngu-Osman Gürün, 'isicelo soCalulo olucacileyo kubafazi kwiZothutho' samiselwa. Ngaphakathi kwinqanaba lokufaka isicelo, abagibeli ababhinqileyo eMuğla bangama-22.00 ebusika kunye ne-06.00 ehlotyeni. [More ...]
Iinkqubo zeZibane ze-LED ezifakwe kwiiNdawo zeBhasi zeNdlu eSakarya
Iinkqubo zokukhanyisa i-LED zifakelwe kwizitishi zikawonkewonke zokusebenzisa izithuthi zikawonke-wonke. Abemi baya kuba nako ukulinda izithuthi zabo ngendlela ekhuselekileyo nekhululekileyo. Isebe lezothutho kuMasipala oMbaxa weSakarya [More ...]
Umongameli Erdoğan ubhengeza i-Istanbul ye-Channel
Umongameli Recep Tayyip Erdoğan wenza ingxelo malunga neKanal İstanbul kusasazo oludibeneyo lwe-CNN TÜRK-Kanal D. Ukuba awukwazi ukufumana mali, siyakwenza ngohlahlo-lwabiwo mali lukazwelonke, u-Erd Erdogan uthe ngeProjekthi yaseKalal Istanbul. channel [More ...]
Iarhente yeemoto zaseKhaya sele ivakalisiwe
Umongameli Recep Tayyip Erdoğan wathi ilogo yemoto yendawo “yi-tulip ında kule nkqubo“ Yabucala noMongameli Kanal kusasazo oludibeneyo lweKanal D, CNN Türk. Erdogan Turkey izihange ukuba zindibuze ukuba ahlole indlela imoto, "abahlobo yokuqala [More ...]
Intambo yeSapanca yeMoto izisa ukudilizwa! Ukugada kuya kuqhubeka de iprojekthi irhoxisiwe
Ukuzabalaza ngokuchasene neprojekthi ye-ropeway yabahlali base-Kırkpınar Umakhelwane kwisithili saseSapanca eSakarya kuqhubeke iintsuku ezili-120. Abahlali ngaphesheya kwesikhululo senqwelomoya engaphantsi kuNyaka oMtsha [More ...]
Ilitye leTrato leNdawo 'UKUVUNA' kuvavanyiwe
UMphathiswa wezobugcisa kunye neTekhnoloji u-Mustafa Varank, Afyonkarahisar Iscehisar Marble Specialised Organised Zone (OIZ) efumaneka kumzi mveliso. UMphathiswa u-Varank, ngaphakathi kwinqanaba lokundwendwela kwakhe i-Demmak Demireller Machchan Industry and Trade Inc. [More ...]
Inkxaso ye-YHT Duzce idlula uMkhankaso weSiginesha
Inkxaso yomkhankaso “weSantya esiphakamileyo sokuDlula e-Düzce” Umkhombandlela weSigama osungulwe yi-Düzce Council Council yabasetyhini kwindawo yokuthenga ngomhla wokugqibela ka-2019 uyanda. Phantse ibe ngama-4 amawaka abantu abasayinileyo kwiintsuku ezi-40 [More ...]